Amaqhinga aqinisekisiweyo okunyusa ukugcwala kweWebhusayithi | Martech Zone
NgeCawa, Agasti 4, 2013 NgoMvulo, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
BWHGeek ivelise le infographic ngeendlela zokwandisa ukugcwala kwindawo yakho. Andiqinisekanga ukuba ndiyavumelana neBWHGeek ngokuba ngubani oyena mntu ungoyena mamkeli… siyamthanda Flywheel (kwaye banxulumene) kwaye ndiyakholelwa ukuba i-infographic yabo inesikhewu esikhulu kuyo… iselfowuni.
Ukusebenza kweselula Indawo yakho yoyilo oluphendulayo, umxholo ophathwayo kunye / okanye usetyenziso lweselfowuni yindlela engummangaliso yokukhulisa ukugcwala kwabantu. Eyethu iPhone kunye neeapps ze-Android zikhula ngenqanaba elikhawulezayo kunendlela yethu yewebhu (ngokulinganayo). Ukuba ne indawo elungiselelwe mobile kwaye usetyenziso lukhulu kwinqanaba lenjini yokukhangela kunye nokhangelo lweselfowuni ngokunjalo. Fumana iselfowuni. Ngoku.
Ngaphandle koko, ndiyalithanda ingcebiso kule infographic- ngakumbi ukuhambisa i Isicwangciso seendaba se-imeyile kwaye unyuselo oluhlawulelweyo. Ukuhlawulela ukugcwala kwabantu kwindawo yakho kunye nabathengisi abaqhuba iindwendwe ezifanelekileyo (sithanda ii-Outbrain kunye ne-StumbleUpon Ads, nazo) zinokukunceda ukhulise abaphulaphuli bakho kwaye ugcine iindwendwe ozihlawule kuqala ukuze zifike.
Agasti 5, 2013 kwi-10: 10 AM
Enkosi ngeengcebiso uDouglas. Kutshanje ndibendwendwele iindwendwe kwaye ndiyathemba ukuba izisa ukugcwala kwabantu. Kwaye ukuba ngumntu weendaba zosasazo ndihlala ndizama ukuxelela abantu ukuba kufuneka isetyenziswe kwaye ukuba iyasetyenziswa, ilungiselelwe.
Agasti 6, 2016 ngo-11: 35 PM
Enkosi kwiingcebiso zakho zokunyusa iTrafikhi yeWebhusayithi, ndiyaludinga olu lwazi